पाठक पत्र « News of Nepal
विद्यालयलाई कुकर्म गर्ने अखडा नबनाऊ
विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिए पनि विद्यालयलाई हरेक आन्दोलनको केन्द्र बनाइने गरेको छ । राजनीतिक दलका विविध कार्यक्रमदेखि लिएर बन्द–हड्तालमा समेत विद्यालय प्रयोग हुने गरेको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र
विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा विलम्ब नहोस्
नेपालमा पनि विद्युतीय गाडी सञ्चालनको बहस चलिरहेको छ। केही महिनाअघिदेखि नेपालका विभिन्न शहरमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने प्रसंग उठ्न थालेको छ। उपराष्ट्रपति, केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले विद्युतीय कार चढ्न थालिसकेका
सुध्रिन नसकेको घरभाडा समस्या
शहरी क्षेत्रमा मानिसको चाप बढ्दो छ । विशेष गरी काठमाडौंमा मानिसको चाप अत्यधिक भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउले आकाश छोएको छ भने सँगसँगै कोठाभाडा तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको
लिपस्टिक–पाउडर लगाएको लोकतन्त्र
जब मानिसलाई महँगी, बेरोजगार, असुरक्षा, धूलो धुवाँ र सवारी लथालिङ्ग र जामले सताइराखेको हुन्छ, तब मान्छेले यो लिपस्टिक–पाउडर लगाएको लोकतन्त्र मात्र रहेछ भन्ने आभास गर्दछ । एकहिसाबले मानिसको तर्क पनि
स्मार्टको समस्या समाधान होस्
नेपालमा अहिले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले मागअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको अवस्था छ । सवारीसाधनको दर्ता, रुट परमिट, लाइसेन्स वितरण, नियमनलगायतका कार्य गर्दै आएको
सरकार निकम्मा हुँदै छ
नेपाल सरकार झन झन आलोचित भईरहेको छ । देशमा दोश्रो पटक दुई तिहाई सहित बहुमतको सरकार नेतृत्वमा पुग्दा नेपाली जनताले धेरै विश्वास र अपेक्षा गरेका थिए । तत्कालिन माओवादी केन्द्र
शान्ति सुरक्षा मजबुद बनाऊ
नेपालमा केही समयदेखि सुरक्षाको अवस्था कहालीलाग्दो भएको छ । विभिन्न स्तरका आपराधिक व्यक्ति, समूह वा जत्थाले समाजमा सामान्यदेखि गम्भीरतम् प्रकृतिसम्मका आपराधिक घटना घटाउँदै आएका छन् । कलिला बालिका बलात्कारदेखि लुटपाटसम्मका
द्वन्द्वकालीन मुद्दा देशबाहिर नजाओस्
नेपालमा भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले अन्तराष्ट्रियरूपमै आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको मान्यता पाएको थियो । आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि जेनेभा महासन्धिका साझा धारा ३ आकर्षित हुन्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र सबैले
हात्ती आतंक नियन्त्रण होस्
केही वर्षअघि ध्रुवे र रोनाल्डोको आतंकबाट चितवन र नवलपरासीवासी निकै पीडित बन्न पुगेका थिए । चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको ध्रुवे बौलाउँदा तीन वर्षमा १५ जनालाई मारेको थियो । ध्रुवे
आफैं बच्ने हो एड्सबाट
डिसेम्बर १ का दिन विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ । विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइएको हो । एचआईभीसँग जीवन बिताउनेहरुका लागि समर्थन गर्ने र एड्ससम्बन्धी रोगबाट ज्यान गएकाहरुको
गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिताले व्यवस्था गरेका स्वतन्त्र प्रेस विरोधी भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा स्वतन्त्र प्रेससहित प्रकाशन–प्रसारणको हक, सूचनाको हक स्थापित छ ।
‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सार्थक बनोस्
नेपालको प्रदेश नम्बर २ पिछडीएको क्षेत्र हो । देशभर महिला हिंसाविरूद्धको आन्दोलन चलिरहँदा प्रदेश नं २ मा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सुरू गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले ‘छोरीका लागि
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार म्यादीजस्तै किन ?
विकास र समृद्धिको नारा बोकेर सत्ता चलाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महिना बित्दासम्म पनि आफ्नो कार्यप्रगति केही देखाउन सकेको छैन । इतिहासकै बलियो र दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार
यातना शिविरझैँ विद्यालय
जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–११ स्थित बाल माध्यमिक विद्यालय, झाप्राका प्रधानाध्यापक पृथ्वीबहादुर सिंहले रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न गएका कक्षा ९ का छात्र शेरबहादुर बस्नेतलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे । बालकको ओठ फुटेको
पूर्णरूपमा खुल्ला दिसामुक्त भएन
केही वर्षअघि देशभर खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने होडबाजी नै चल्यो। विभिन्न जिल्लाका विकट बस्तीमा अझैसम्म शौचालयको सुविधा पुगेको छैन। अझै पनि विकट क्षेत्रका अधिकांशले कान्ला, खोल्सा, झाडी, जंगल र
कहिलेसम्म यात्रा काल बन्ने ?
दैनिक सडक दुर्घटना बढ्दो छ । सरकारले नियम बनाउँछ, लागू गर्दैन । फलस्वरूप एउटै प्रकृतिका घटना दोहोरिइरहेका छन् । जस्तासुकै घटना भए पनि र त्यस्ता घटना दोहोरिए पनि राज्य कानमा
आधारभूत आवश्यकता पनि जनताले नपाउने ?
मलुकको संविधान २०७२ समाजवादतर्फ उन्मुख भएको संविधान हो । कानुन पनि बन्दै गरेको अबस्था छ । लामो समयको संघर्षपछि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि आफैले बनाएको संविधान धेरै सभासदको सहमतिमा लागू
विडम्बना ! १२ वर्षमै गर्भवती
कलिलै उमेरमा गर्भवती भएकी गङ्गामाया चेपाङलाई उपचारार्थ थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा भर्ना गरिएको छ । मकवानपुर राक्सिराङ गाउँपालिका–३ स्थित माइतीघरमा बस्दै आएकी गङ्गामाया १२ वर्षको उमेरमा गर्भवती बन्नुपर्ने अवस्थाले नेपाली समाजको अहिलेको
सडक बत्ती मर्मत गरियोस्
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका सडक बत्तीहरु प्रयोगमा नआउँदा रातको समयमा सडक दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ । यात्रुको सहजताका लागि राखिएका बत्तीहरु प्रयोगमा नआउँदा यात्रुहरुलाई समस्या पर्ने गरेको छ ।
वायु सेवा निगम डुब्नुमा भ्रष्टार प्रमुख कारण
नेपाल वायु सेवा निगम टाट पल्टेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगम आर्थिक संकटका कारण डुब्न लागेको खबर न्यूज अफ नेपालमा पढेसँगै म मात्रै हैन आमनेपालीमा चिन्ता